Posted by Tranquillus | Mar 9, 2018 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Warbixinta: 4 qodob oo lagama maarmaan ah in la ogaado si loo guuleysto
Waa inaad sameysaa a warbixinta, ama warbixin, codsi maamulahaaga. Laakiin, garan mayso halka laga bilaabayo ama sida loo sameeyo.
Halkan, waxaan muujinayaa nidaam sahlan ee 4 si loo xaqiijiyo warbixintan si karti leh iyo xawaare gaara. Waa in lagu qoro taariikhda macquulka ah.
Maxay tahay isticmaalka warbixin?
Waxay siisaa awooda qofka loogu talagalay inuu awoodo inuu ku tiirsanaado xogta la soo bandhigay si go'aan looga gaadho ficil. Macluumaadka lagu duubay warbixinta ayaa suuragal ka dhigaya in laga jawaabo hal ama in ka badan oo ah su'aalaha lagama maarmaanka u ah go'aan-gaarista.
Taasi waxay tidhi, shaqaale ayaa awood u leh inuu qoro warbixinta si uu ugu soo jeediyo kormeeraha mowduuc gaar ah si uu u sameeyo hagaajin, tusaale ahaan hay'adda adeegga ama beddelidda qalabka. Warbixin waa hab fiican oo loola hadlo xiriirka ka dhaxeeya kuwa ka sarreeya iyo kuwa hoos yimaada.
Iyadoo ay ku xiran tahay ujeedada warbixinta, soo bandhigidu way ka duwanaan kartaa, hase yeeshee hababka aan hoos ku muujiyo waxay ku ansaxayaan dhammaan warbixinnada aad samayn doonto.
Qodobka koowaad - Codsiga waa inuu ahaadaa mid sax ah oo cad.
Tilmaamahan ugu horeeya wuxuu noqon doonaa qodob muhiim ah oo ku saleysan shaqadaada oo dhan. Waxay sidoo kale ka saari doontaa aagga ay khuseyso.
Qofka hela warbixinta
- Muxuu si sax ah uga doonayaa warbixintaada?
- Maxay noqon doontaa himilooyinka iyo ujeeddooyinka warbixintu isaga u leedahay?
- Sidee waxtar ugu yeelan doontaa warbixintu qofka aad heleyso?
READ Marxaladda qabyada ah in si fiican loo qoro
- Qofka qaata ma horey u ogyahay maadada?
- Ogow waxa ay aqoontoodu tahay si aan loogu soo celin macluumaad hore loo ogaa.
Kiiska iyo habdhaqanka
- Waa sidee xaaladdu?
- Maxay yihiin sababaha ku xiran codsiga warbixinta: dhibaatooyinka, isbeddelada, isbeddelada, wax ka beddelka, hagaajinta?
Qodobka labaad - tixgeli, xulo oo ururi macluumaadka muhiimka ah.
Macluumaadku waxay noqon karaan kuwo badan, ha noqdaan qoraallo, dokumantiyo ama warbixino kale, iyo ilo kala duwan, laakiin waxa muhiim ah in la xushmeeyo in la xasuusto oo keliya kuwa muhiimka u ah, lagama maarmaan iyo lagama maarmaan iyo in aan la qaadin macluumaadka dano yar ama dib-u-celin taasoo dhaawici karta warbixinta kama dambaysta ah. Sidaa daraadeed waa inaad isticmaashaa macluumaadka ugu habboon ee u dhiganta warbixinta codsiga.
Qodobka saddexaad - abaabul oo samee qorshaha
Caadi ahaan, qorshuhu wuxuu ku bilaabmaa hordhac, ka dibna wuxuu sii wataa horumarkiisa, wuxuuna ku dhamaanayaa gabagabo.
Hoosta, qorshaha la soo bandhigay waa mid guud ahaan la kulmay. Doorka hordhaca iyo gabagabadu ma kala duwan yihiin, in ay sii wadaan kaalintooda. Taas beddelkeeda, horumarka waxaa loo maleyn karaa hab isbeddel ah sida ku cad warbixinta aad u baahan tahay inaad ogaato.
Waxay bixisaa macluumaad muhiim ah oo la xiriira sababta keentay warbixinta; dhiirigelinteeda, ujeedooyinkeeda, raison d'être, mudnaanteeda.
Macluumaadkani waa inuu isu keenaa dhowr erey oo ujeedada warbixinta, qoraal gaaban markaad faahfaahinayso oo dhammeystiran.
Xaqiiqdii lama oggola in la iska dhigo hordhaca hordhaca, maadaama ay horey u qeexday xogta saxda ah ee codsiga u oggolaanaya labada qaataha iyo qoraaga warbixinta inay yihiin qaar ka mid ah is fahamkooda. Waxa kale oo ay kaa caawineysaa in la xusuusto shuruudaha codsiga, xaaladda, shuruudaha marka warbixinta aan si degdeg ah loo baarin ama haddii loo baahdo in dib loo eego.
Horumarka waxaa caadi ahaan loo qaybiyaa saddex qaybood.
- Tiro koob la taaban karo oo aan eex lahayn ee xaaladda ama macnaha guud, taasi waa in la yiraahdo xisaab faahfaahsan oo wixii horay u jiray.
- Go'aan cad oo ku saabsan waxa jira oo muujinaya dhinacyada wanaagsan iyo qaababka xun labadaba iyada oo la siinayo falanqeyn caddaalad ah oo ah mid qiiro leh oo la taaban karo sida loogu baahan yahay.
- Talo bixin, talo bixin iyo tusaaleyn, sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee la xidhiidha dheefaha iyaga ku dhaca.
Ma aha inay ku jiraan mawduuc cusub oo aan lagu sheegin horumarinta. Iyadoo aan laheyn hadal gaaban oo ku saabsan horumarka, waxaa jira jawaabo soo-jeedin ah oo soo jeedinaysa mid cad ama midka xalalka soo socda ee talooyinka ku xusan midaan.
Qodobka afaraad - Qoritaanka warbixinta
Xeerarka qaar ee guud ee dhamaan daabacaadyada waa in la ixtiraamo. Xoogaa waxaa lagu dhajin doonaa eray macquul ah oo la heli karo hingaad la'aan waayo xirfad-xirfadeed dheeraad ah, weedh gaaban si loo fahmo wanaaga, qaab-dhismeedka hawada ee cutubyada si fiican loogu akhrisan karo.
Qaadashada daryeel gaar ah foomka warbixinteeda waxay siin kartaa akhristaha ama qaataha raaxo iyo akhris raaxo daruuri ah.
- Waa inaad si kooban oo cad u qeexdid qoraalkaaga
- Si loo hubiyo dheecaan ka sii wanaagsan akhrinta warbixinta, u gudbi akhristaha lifaaqa kaas oo ku siin doona xoogaa macluumaad dheeri ah sharraxaaddaada markii loo baahdo.
- Ku dar qoraal kooban marka warbixintaadu ay ka badan tahay saddex bog, taas oo u oggolaanaysa qofka qaataha inuu jihaysto nafsadiisa xagga aqrintiisa, haddii taasi ay tahay xulkiisa.
- Markay faa'iido leedahay ama lama huraan tahay, isku dar miisaska iyo garaafyada kale ee ka tarjumaya qoraalkaaga si loo muujiyo xogta. Waxay lagama maarmaan u noqon karaan xaaladaha qaarkood faham wanaagsan.
- Ha dhaafin cinwaannada iyo cinwaannada hoosaadyada si aad si cad ugu xadideyso qayb kasta oo ka mid ah warbixintaada si aad ugu hesho, markale, dheecaan ahaan.
Gebogebo: Maxaa la xasuustaa
Turjumaadda iyo fahamka habboon ee codsiga wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku jawaabto adigoon ku dhicin maadada si aad u hesho waxtarka.
Warbixintaada, waxaad awood u leedahay inaad la wadaagto fikradahaaga adigoo ka soo horjeeda warbixinta fudud.
Si ay u noqoto mid waxtar leh, warbixintaadu waa inay bixisaa jawaabaha su'aalaha uu weydiiyo qofka loo soo diray, sidaa awgeed danta ugu weyn ee guud ahaan soo bandhigideeda; diyaarinta, qaab dhismeedka, bayaanka, iyo soo bixitaankiisa; hordhac, horumar, gabagabo.
U sharax dooddaada, aragtidaada iyo xalalka la soo jeediyey.
Pour la qaabeynta on Microsoft Word, leexashada 15-ka daqiiqo ee YouTube-ka ayaa kuu anfici doonta wax badan.
Warbixinta: 4 Qodobbada Muhiimka ah ee Lagu Ogaado Si Guusha Janaayo 18th, 2021Tranquillus
horeMar dambe ha ku qaldamin hal qalad higgaadinta habka 'Orthodidact'
socdaSida loo qoro emayl xirfad leh